"Iza" no miasa tsara hanidiana? | Martech Zone
"Iza" no miasa tsara hanidiana?
Alakamisy, Jolay 21, 2011 Alarobia, Oktobra 26, 2011 Douglas Karr
Namaky tao amin'ny seha-pifaneraserana aho ary nisy mpitsidika nanontany ny mpampahalala vaovao hoe “Iza” no niasa tsara hanidiana fironana izay tsy nanidy avy hatrany. Fanontaniana tena hafahafa izany satria misy be dia be ny miasa any am-piasana. Inona ny indostria? Ny sandan'ny fifanarahana? Ny demografika na ny firaketana an-tsary an'ny orinasa ho avy? Moa ve izy ireo eo amin'ny sehatry ny fahafantarana fa manam-pahalalana amin'ny Internet? Asa eto amin'ny faritra sa raharaham-pirenena?
Ahoana no hamaritanao ny famakafakana an-doha ny mpanelanelana amin'ny media? Ny dokam-barotra fikarohana karama dia nosoratana hafa noho ny, ohatra, lohatenin'ny pejy sy famaritana meta. Tsara kokoa ve ny iray noho ny iray hafa? Tsy ho fantatrao raha tsy andramanao tsirairay amin'ny antsipiriany ny fampielezan-kevitra ataonao. Mila fitsapana vitsivitsy izany.
Ary koa, ny 1 + 1 indraindray dia mitovy amin'ny 3 na mihoatra raha resaka mpanelanelana. Azonao atao ny manao doka amin'ny Facebook izay mitarika mankany amin'ny lahatsoratra bilaogy iray, izay manosika ireo mpampiasa hanindry ny fiantsoana andraikitra ary hisoratra anarana amin'ny mailaka. Avy eo… mety hilatsaka fampielezan-kevitra mandritra ny 6 volana amin'ilay vinavina ianao ary hahazo valiny lehibe 3 volana aty aoriana. Mediam-bahoaka "iza" no tena niasa teto?
Tsy mitovy ihany koa ireo mpanjifa sy ny vinan'ny orinasa finiavana rehefa mandany ny karazana salantsalany tsirairay. Lahatsoratra bilaogy hita amin'ny fikarohana biolojika, ohatra, dia mety hanome fahafaham-po ny fahalianan'ny prospect ary hanosika azy ireo hisoratra anarana na hisintona whitepaper. Na izany aza, ny tanjon'izy ireo dia mety tsy ny hividy… hijery fotsiny. Izany no antony maha-zava-dehibe ny fisamborana ny mombamomba azy ireo sy ny famoahana azy ireo matetika. Hevitra tsara ihany koa ny mifandray amin'izy ireo amin'ny alàlan'ny media sosialy. Rehefa izy ireo dia vonona ny hividy… ho eo an-tsaina ianao.
Mampihatra fampiharana ara-barotra amin'ny sisin-tany ho an'ny mpanjifanay rehetra izahay. Indraindray isika dia manangana rindranasa izay manintona ny saina sy ny fahefana… amin'ny fotoana hafa mety hanondro azy ireo amin'ny haino aman-jery nentin-drazana toy ny mailaka mivantana aza isika. Ny zavatra iasantsika mafy dia ny fiantohana fa tsy manaparitaka ny tetibola amin'ny antonony iray izahay, ary manandrana mifanohana ny mpanelanelana rehetra.
Ny prospect-base anao dia mizarazara be dia be amin'ireo media rehetra ireo - finday, horonan-tsary, sosialy, fikarohana, nentim-paharazana, ara-jeografika, mailaka, bilaogy, dokam-barotra be karama, famoahana gazety, fampahalalana an-tsary, sns. Fa tsy mifidy ny iray hafa, atombohy amin'ny ilay iray izay niainanao traikefa kely dia tantano izany, ary avy eo manomboka manampy azy amin'ny media iray isaky ny mandeha.